UShabba uyilungele iChiefs | Scrolla Izindaba
UShabba uyilungele iChiefs
UShabba ungumqemane futhi ukulungele ukubhekana ne-Chiefs ngoLwesithathu.
USiphiwe “Shabba” Tshabalala uphuthelwe wuhambo oluya ku-Bloemfontein Celtic ngeSonto kodwa ngokusho kwesikhulu sezindaba zoSuthu, uBrilliant Mkhathini, yena nabanye abadlali ababili, uMakhehleni Makhaula noSibusiso Mabiliso, bese bevele beluleme ngesikhathi izindaba ziqhamuka ngempelasonto ngesimo sabo se-Covid-19 .
“Abadlali abathathu sebebuya emgonqweni. Bebebuyele ekuziqeqesheni ngoLwesihlanu,” kusho uMkhathini.
UTshabalala ujoyine AmaZulu njenge-free agent ekuqaleni kwesizini ngemuva kokukhishwa yiqembu lase-Turkey i-BB Erzurumspor ekupheleni kwesizini yowezi-2018/19. Ukubonakala kwakhe kuphela kuleli qembu kwaba lapho engena esikhundleni somunye ngesikhathi behlulwa ngamagoli amabili eqandeni yi-Golden Arrows emdlalweni owawuzoba ngoZibandlela.
Umdlalo wangoLwesithathu umnikeza ithuba lokwengeza obunye ubuhlungu ekuqaleni kwesizini kweqembu lakhe langaphambili. Lo mdlali onyawo lwesokunxele ugcine ukudlala ne-Chiefs ngowezi-2007 ngesikhathi esadlalela i-Free State Stars. UShabba udlale imidlalo engaphezu kwengama-200 ngesikhathi ehlala iminyaka eyi-11 kwi-Chiefs.
Umqeqeshi waMaZulu, uBenni McCarthy, uzolingeka ukuthi amphose phakathi nalabo okwakungozakwabo emdlalweni ozoba e-Jonsson Kings Park Stadium, eThekwini, ngehora lesithathu ntambama ngoLwesithathu.
Abadlali baMakhosi bakudala, uTsepo Masilela noLehlohonolo Majoro kumele nabo bawulindele umdlalo. Akukho abangakwazi ngemidondoshiya yase-Soweto futhi bazokwazi nokuthi babashaye kuphi lapho okuzolimaza kakhulu khona.
I-Chiefs isengcupheni njengamanje ngemuva kokuhlulwa okokuqala onyakeni, kanti uMcCarthy uzofuna ukuthi abadlali bakhe bakusebenzise lokho. Usuthu ludlale ngokulingana ngegoli elilodwa kwelilodwa ne-Celtic kwathi iChiefs yahlulwa ngamagoli amabili eqandeni ekhaya idlala ne-Maritzburg United.
Enye imidlalo ye-DStv Premiership ngoLwesithathu
I-SuperSport United izodlala ne-Celtic (e-Lucas Moripe Stadium, ngo-5pm); i-Tshakuma Tsha Madzivhandila izodlala ne-Orlando Pirates (e-Thohoyandou Stadium, ngo-5pm).